Qareennada Somaliland oo ka Digay in la Xadho Garyaqaanno u Doodaya Shacab Wakaaladda Biyaha ka Cabanaya | Aftahan News
Qareennada Somaliland oo ka Digay in la Xadho Garyaqaanno u Doodaya Shacab Wakaaladda Biyaha ka Cabanaya
Hargeysa (Aftahannews)- Ururka Qareenada Somaliland ee (SOLLA), ayaa canbaareeyay qareeno ay sheegeen in waaran Maxkamadeed loo jaray si loo xidho.
Qaar ka mid ah Qareenada ayaa ku tilmaamay in isku dayga la doonayo in lagu xidho qareenada uu tusaale u yahay calaadda Somaliland iyo halka ay marayaan Maxkamaddihii dalku.
“Waxay arrintan muujinay in Maxkamaddaha Somaliland ee maanta ay ka miciin liitaan Maxkamaddii Badbaada ee xilligii xukuumaddii Milateriga, sababtoo ah waxay ka xishoon jirtay in qareen u doodaya Bulshada la xidho.” sidaa waxa yidhi, mid ka mid ah Qraeenada la hadlay warabaahinta.
Ururka Qareenada Somaliland ee SOLLA